Willingness to Pay for Prospective COVID-19 Vaccine (Afaan Oromoo)
Qorattoonni Giddugaleessa Qorannoo Walta'iinsa “Egeree Afrikaa” (Collaborative Research Center “Future rural Africa”) qaamolee waliin hojjatan waa’ee talaallii Koviid-19 gara fuula duraa argamu bitachuuf namoonni Afrikaa hammam kaffaluu akka fedhan qorachaa jiru.
Baga gara sona qorannoo nagaan dhuftan.
Kaayyoo sonichaa: Qorattoonni Giddugaleessa Qorannoo Walta'iinsa “Egeree Afrikaa” (Collaborative Research Center “Future rural Africa”) qaamolee waliin hojjatan, Yuunivarsiiti Gondar (Itiyoophiyaa), Yuunivarsiiti Kabale fi Apaata Insaayti (Yugaandaa), Yuunivarsiiti Bonn (Jarmanii), Yuunivarsiiti Niwu Sawuuz Weels (Awustiraliyaa), Yuunivarsitii Ruhr Bochum (Jarmanii) fi Yunivarsiiti Laayden (Neezarlaand) waliin wal ta’anii waa’ee talaallii Koviid-19 gara fuula duraa argamu bitachuuf namoonni Afrikaa hammam kaffaluu akka fedhan qorachaa jiru.
Maaltu eegama: Sonicha xumuruuf yeroo daqiiqaa 10 hin caalle fudhata. Jalqabarratti odeeffannoo waa’ee keessanii (Umurii, Saala, sadrakaa baruumsa fi hojii) barreessitu. Itti fufuun sonichi Koviid-19 akkamiin jiruu keessan akka miidhe, amntaa isini sirna fayyaa biyya keessanii irraa qabdanii fi waa'ee fayyummaa keessan yeroo amma ilaalcha keessan ni sakkatta'a. Dhumarrattis talaallii Koviid-19 fuulduratti argamu, yoo gabaa biyya keessatiif dhiyaate bitachuuf hammam kaffaluu fedhii akka qabdan ni sakkatta'a.
Sonichi Afaanota shaniin qophaa'ee, jechuunis Afaan Ingiliizi, Swaayilii, Afaan Amaara, Afaan Oromoo fi Kinyarwaanda dha. Maaloo, gaafficha xiyyeeffannoon dubbisaatii deebii keessan isuma dhugaa laadha.
Hubachiisa: Qorattoota ykn dhaabilee kanneen keessa kamuu hojii talaallii Koviid-19 qopheessuu keessa qooda hin qaban. Qorattoonni kampaanii talaallii Koviid-19 waliin hariiroo qabu kamuufu hin hojjatan ykn deeggarsa maallaqa irra hin fudhanne. Hojiin kun gutummaa guututti dhimma qorannoo qofaaf yoo ta'u, yaalii talaallii Koviid-19 qopheessuuf godhamaa jiru irratti dhiibaa kamuu hin qabaatu. Ilaalchi maxxansaalee qorannoo kana irratti hundaa'an keessatti calaqqisu kan qorattootaa malee dhaabilee isaan bakka bu'an hin ibsu.
Odeeffannoo waa'ee yaalii talaallii Koviid-19 qopheessuutif,fuula Dhaabata Fayyaa Addunyaa kana mil'adhaa
Odeeffannoo wa'ee ittisa Koviid-19 tiif, marsaariiti Dhaabata Fayyaa Addunyaa assitti argamu kana ykn Giddugaleessa To'annoo Dhukkuboota kana mil'adhaa
Itti fufuudhaaf duraan dursa imaammata daata kan sona keenyaa fudhadha.
Sona kana jalqabuu keessaniin dura, hirmaannaan keessan fedhii irratti kan hundaa’ee ta’uu beeku qabdan. Odeeffannoo barreessitan osoo hin kuusinyyuu yeroo barbaaddanitti dhaabuu dandeessu. Waa'ee sona kanaa jalqabuu keessan dura odeeffannoo dabalataa yoo barbaaddan gaaffii keessan kallattiin gara Dr Emmanuel Rukundo ykn Bisrat Haile erguu danddeessu.
Gabaabinni yeroo fi odeffannoo osoo hin daangessin hirmachuu keessan ni dinqisiifanna kanaaf nuti waa deebfnee keennu feena. Carraa lotorii 10 akka biyyaatti tokkoon tokkoon isaani gatii qilleensaa ykn Data doolara 10 mo'achuu dandeessisan kennuu barbaadna. Lotorii kana irratti hirmaachuun hiree mo'achuu argachuu yoo barbaaddan, gara xumuraa sona kanaa irratti teessoo Imeelii keessanii akka kennitan ni gaafatamtu. Carraan lotorii erga bahee booda, yoo mo'attan karaa Imeelii kana isnin qunnamna. Sana booda imeelii hunda ni haqna malee dhimma biro kamiifu hin fayyadamnu. Imeeliin keessan akkuma seera “General Data Protection Regulation (GDPR) Awurooppatti akka hin mul'anne (encrypted) ta'a. .